नेताज्यू, भोको पेट बाँचेकाको राजनीति के हो ? « Sansar News
नेताज्यू, भोको पेट बाँचेकाको राजनीति के हो ?
मानिसहरू जुलुसमा हिँडिरहेका थिए । पुलिसले गोली चलाउन थालेपछि ३ जना मानिसहरू गोली लागेर ढले । ढल्दा एउटाको मुखबाट निस्कियो– ‘राम’, अर्कोको मुखबाट निस्कियो– ‘माओत्सेतुङ’, अर्कोको मुखबाट निस्कियो– ‘आलु’ ।
जब पोस्टमार्टमको नतिजा आयो, तब पत्ता लाग्यो कि राम र माओत्सेतुङ भन्नेको पेट भरिएको थियो । भारतका प्रसिद्घ कवि सक्सेनाको कविताको एक टुक्रा हो यो । तर, सानो टुक्रामा जीवनको कति ठूलो सत्य छिपेको छ ।
भोको पेटले त भात र आलु उच्चारण गर्छ तर राजनीतिका दिग्गजहरूले आफू र आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ पेटभरी खुवाउँछन् । आनन्दपूर्वक सुरक्षित ठाउँमा राख्छन् र अरूका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नारा र जुलुस लगाउन उक्साउँछन् ।
उनीहरूलाई साधारणजनको माया छैन । प्रायः कुनै पनि पेसामा लागेका मानिसहरूले आफ्ना छोराछोरीले आफ्नो बिँडो थामून् भन्ने चाहन्छन् । किसानले आफ्ना छोराछोरी झन् ठूलो किसान बनून् भन्ने चाहन्छन् । शिक्षकले आफ्ना सन्तान आफूभन्दा बढी पढेर राम्रा शिक्षक बनून् भन्ने चाहन्छन् । लेखक र डाक्टरहरूले पनि प्रायः त्यस्तै चाहन्छन् ।
तर, एउटा स्मगलरले चाहिँ आफ्ना सन्तानलाई आफूले गरेको कालो कामका बारेमा थाहा नहोस् भन्ठान्छ । अरूलाई बिष हालेको रक्सी खुवाएर मार्ने व्यापारी पनि आफ्नो सन्तानले चाहिँ रक्सी नखाओस् भन्ने ठान्छ । तर, अरूको सन्तानलाई कालो धन्दामा लगाउन र अरूका सन्तानलाई रक्सी खुवाउन व्यापारीलाई केही पनि लाग्दैन ।
कलिला मस्तिष्क भएका गाउँघरबाट आएका जनताका छोराछोरीहरूले चाहिँ नेताजीले भनेको कुरा ठीक हो भनेर पालना गर्छन् । उनीहरूलाई भविष्य देखाइएको हुन्छ । २०४६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका कतिपय विद्यार्थीहरू अहिले परिवारको पेट पाल्न विदेशमा गोठालो गएका छन् । विदेशमा गएर काम गर्नलाई नराम्रो र गोठालो काम सानो भनेको होइन, तर कुनै पनि नेताजीहरूका छोराछोरीचाहिँ गोठालो बनेर शारीरिक काम गर्न गएका छैनन् भनेको मात्र हो ।
नेताजीका छोराछोरीहरू विदेश गएका त उतै बस्ने, पढ्न र सयर गर्न हो । तर, यहाँबाट अहिले पनि विद्यार्थी चुनावमा होमिएका र आफ्नाआफ्ना पार्टीको झण्डा उठाएर अरूलाई मार्न तयार रहेका विद्यार्थीहरू अबको ५ वर्षपछि जब बेरोजगारको श्रेणीमा परेर ‘अब जीवन कसरी धान्ने हो ?’ भन्ने मनन् गर्लान्, तब अहिले उक्साउने नेताले के उनीहरूको पेट भरिदेलान् ?